October 23, 2020 - Padaethar
၁၅ မိနစ်​ စာ​လောက်​နဲ့ ဘ၀ တစ်​ခုလုံးကို မလဲကြပါနဲ့…
October 23, 2020 by Padaethar
Single Mother ညီမ​လေး တစ်​​ယောက်​​ကို လူမသိ သူမသိ​အောင်​က​လေး​မွေးဖို့ ကူညီ​ပေးလိုက်​တာကို ပိုစ့်​​လေးတင်​လိုက်​တယ်​…. မကြာပါဘူး..​..နောက်​​နေ့ကစလို့ ညီမ​လေး ​တွေ တစ်​​ယောက်​ပြီး တစ်​​ယောက်​ ချက်​​ဘောက်​စ်​က​နေ ၊ ဖုန်းက​နေ ၊ မတ်​စိတ်​က​နေ ၊ အကူအညီ​လာ​တောင်းကြ​တော့တာပဲ.. ပရိုဖိုင်​ အမှန်​နဲ့ မိ​ကောင်းဖခင်​ ပညာတတ်​ ညီမ​လေး​တွေ ကျွန်​တော့်​​ဆီဖုန်းဆက်​ပြီး ငိုယို တိုင်​ပင်​ကြတယ်​…. တစ်​​နေ့တစ်​​နေ့ ဒီညီမ​လေး​တွေနဲ့ ဖုန်းဆက်​ပြီး အား​ပေးရတာ အလုပ်​တစ်​ခုကို ဖြစ်​လို့…. တစ်​ချို့က မိဘအိမ်​မှာ..(ဗိုက်​​လေးပူလာတဲ့ သမီး​လေးကို မိဘက ၀လာတယ်​ပဲ ထင်​​နေ​လေရဲ့..) တစ်​ချို့က တိုက်​ခန်းကျဉ်း​လေးထဲမှာ ….(ယူမယ်​လို့ ခိုး​ပြေးပြီးခါမှ တစ်​​ယောက်​ထဲထားခဲ့တာ..) တစ်​ချို့က တက္ကသိုလ်​မှာ ​ကျောင်းတတ်​​နေတယ်​.. အင်္ကျီပွပွ​တွေဝတ်​ပြီး တစ်​​နေတစ်​ခြား ပူလာတဲ့… ဗိုက်​​လေးကို အချိန်​တစ်​ခုထိ ဖုံး​နေကြတယ်​.. (Fb … Read more
ချစ်တာတော့ ချစ်ပါ ညီမလေး…အခွင့်အရေးတော့ မပေးမိပါစေနဲ့….
သတိထား ညီမလေးအရေခွံဘယ်လောက်လဲလဲမြွေဆိုတာ တီဖြစ်မသွားဘူး…..ပြောင်းလဲတဲ့လောကကြီးမှာ လိုက်ဖက်ညီအောင်အရောင်ပြောင်းနေရင် ပုတ်သင်ညိုသာသာဖြစ်တော့မပေါ့….. ပတ္တမြားမှန်တယ်ဆိုတိုင်း နွံထဲဝင်မှိုင်ပြစရာလားကွယ်ခြေဆေးမခံရအောင် အိုင်ထဲထိုင်မယ့်အစားရေသန့်လို့တံဆိပ်ကပ်နိုင်ရင် တန်ဘိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်…. အိမ်နဲ့ဝေးတိုင်းလဲ….အားမငယ်စိတ်မပျက်နဲ့အမောပြေရေတစ်ခွက် အိမ်ပြေးလေးအတွက်တဲ့အမေ နေ့တိုင်းခပ်ထားတယ်။ မမှားဘူး ညီမလေးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်အရိုးဆို ကြည့်ရှောင်ရမယ်လေ…..ကိုယ်က ခဏတာဝါးမယ့် သွားမဟုတ်ဘူး…. စကားခလုတ်တွေ ဘယ်လောက်တိုက်တိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိခိုက်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်…..တကယ်တော့ ဟင်းကြေးများတယ်ဆိုတာ အစားကောင်းစားရတဲ့သူတွေကို သမုတ်တဲ့ အမည်သက်သက်ပါ။ ချစ်တာတော့ ချစ်ပါ ညီမလေး….ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့ အခွင့်အရေးတော့ မပေးမိပါစေနဲ့…..ဘဝနဲ့ရင်းတဲ့လက်ရေးအတွက် ဖျက်ဆေးမရှိဘူး…. ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုအတွက် စိတ်ရိုင်းမမွေးမိပါစေနဲ့…..မှတ်ပုံတင်ထဲပြန်ကြည့်ပါ ညီမလေး…..ကိုးကွယ်စရာမှာ အချစ် မဟုတ်ဘူးလေ။ ညီမလေးရေ….ချစ်ဦးသူနဲ့ ရတယ်ဆိုတာတို့အိမ်ဘေးက နှင်းဆီလောက်သာရှိပြီး အချစ်ဦးနဲ့ လွဲဖူးသူဟာ အိမ်ရှေ.က ခရပွင့်တွေကြွေသလောက်ရှိတယ်….. အသဲကွဲတယ်ဆိုပြီး ဘီယာသောက်လောကကြီးကို မှောက်ပစ်တတ်တာပညာမဲ့သူတွေ သက်သက်ပေးတဲ့ဆင်ခြေတစ်ခုပါ….မုန်တိုင်းထဲမှာလဲ အောက်ဆီဂျင်ပါပါတယ်လေ…. နည်းတယ်အထင်နဲ့ ရွက်ကိုတော့ပြင်းပြင်းမလွင့်လိုက်ပါနဲ့…..တည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတာ မိန်းကလေးအိနြေ္ဒလေတန်ဘိုးသိတဲ့သူက တန်ဘိုးထားလာပါလိမ့်မယ်…ကိုယ်ကသာ ရတနာတစ်ပါးဖြစ်ပါစေ … Read more
ဝေဘာဂီက ဆရာဝန်ကြီး ပြောပြီ အင်အားပြပြီးနောက်ဆက်တွဲ ကိုဗစ်ဖြစ်ကြရင် အိမ်မှာပဲသေကြပါ။ ကားပေါ်မှပြုတ်ကျရင် လမ်းမှာပဲသေကြပါ။ သွားလာရင်းဓာတ်လိုက်သေလျှင်တခါတည်းမြှုပ်ကြပါ။ ကားပေါ်မှ မီးစက်မီးလောင်လျှင် တခါတည်း အရိုးကောက်ကြပါ။ အနီ နဲ့အစိမ်းရန်ဖြစ်ကြလျှင် တခါတည်း များများသေအောင် ခုတ်ကြပါ။ ဆေးရုံဝန်ထမ်းများနှင့် volunteers များ.,အလှူရှင်များမှာ ကိုဗစ်တခုတည်းနဲ့အလုပ်ရှုပ် ပင်ပန်းလှပါပြီ။ သက်ဆိုင်ရာ အထက်လူကြီးများ၏ လုံးစုံကန်းနေသော မျက်လုံးများနှင့် ပင်းနေသော နားများမှာလည်း အများရယ်စရာဖြစ်နေပါပြီ… နေရာအနှံဖွင့်ထားသော center များကိုသွားရသည့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများလည်း စက်ရုပ်များမဟုတ်ကြပါ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ လက်ပန်းကျသွားပါလိမ့်မည်။ အင်အားပြခြင်းများကို ဂုဏ်ယူစွာshare နေသော ငပိန်းများလည်း တွေ့ရပါသည်။ မှတ်ချက်။ ။ပင်ပန်းလွန်း၍ ရေးမိပါသည်။ ကမဝ ဝန်ထမ်းများမှာလည်း ကိုယ်တိုင်သိမှကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါမည်။ PPE … Read more
ဒီ(၁၆)ချက်ကို အလွတ်မှတ်နိုင်ရင် မင်းဘ၀ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာမရှိနိုင်တော့ပါ…